Semalt ले लिङ्कहरूको साथ तपाईंको वेबसाइटलाई कसरी ठीकसँग मोनेटाइज गर्ने भन्ने बारे बोल्छ: जोखिमहरू र तिनीहरूबाट बच्ने तरिकाहरू
हामी प्रायः सुन्छौं कि लिङ्क निर्माण अधिक र अधिक बेकार हुँदैछ। यद्यपि, जबसम्म त्यहाँ सामान्य रूपमा एसईओ र विशेष रूपमा लिङ्क रैंकिंग कारक छ, हामीसँग अझै यसको बारेमा पत्ता लगाउन धेरै छ। लिङ्कहरू कसरी बेच्ने र तपाईं तिनीहरूसँग कति कमाउन सक्नुहुन्छ: यो हाम्रो आजको सामग्रीमा आधारित हुनेछ।
के तपाईलाई थाहा छ कि तपाईले SEO उपकरणहरू प्रमोट गरेर सजिलै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ? सायद तपाईले पहिले नै SEO मार्फत पैसा कमाउने अन्य धेरै तरिकाहरू सुन्नु भएको छ, तर हामी तपाईंलाई पत्ता लगाउन सुझाव दिन्छौं Semalt को साझेदार कार्यक्रम। यस कार्यक्रम मार्फत, तपाईले उत्तम एसईओ उपकरणलाई बढावा दिएर एसईओसँग पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ: SEO व्यक्तिगत ड्यासबोर्ड।
आजको लेख सुरु गर्न, पहिले जाँच गरौं कि लिङ्क रैंकिंग कारक अझै पनि अर्थ बनाउँछ।
के लिङ्क रैंकिंग कारक अझै जीवित छ?
लिङ्क बिक्री राजस्व पहिलो आईफोन भन्दा पुरानो छ। तर यदि अघिल्लो अप्टिमाइजरहरू ब्याकलिङ्कहरूको संख्यासँग बढी चिन्तित थिए भने, आज तिनीहरूको गुणस्तरलाई बिना शर्त जोड दिइएको छ। अब देखि, एक विचारहीन खरिद र बाह्य लिङ्कहरूको सेटिङको लागि, तपाईं द्रुत रूपमा खोज इन्जिनहरूको प्रतिबन्ध अन्तर्गत पर्न सक्नुहुन्छ। "लिङ्क पदोन्नतिले काम गर्छ?" बारे वार्षिक आतंकको यो मुख्य कारण हो।
यद्यपि, यदि तपाइँ तपाइँको लिङ्क बिल्डिंग ठीकसँग बनाउनुहुन्छ भने, प्रतिबन्धित हुने खतरा न्यूनतम वा नगण्य छ।
Sape 2021 SEO र Link Building Market Research को अनुसार, सर्वेक्षण गरिएका 90% विशेषज्ञहरूले विश्वास गर्छन् कि फिल्टरहरू द्वारा हिट हुने सम्भावना कम छ।
वास्तवमा, लिङ्क पदोन्नतिको सार उस्तै रहन्छ: साइटको अधिकार र लोकप्रियता बढाउनको लागि दाता साइटहरूबाट लिङ्कहरू खरिद गर्दा सधैं रैंकिंगमा सकारात्मक प्रभाव हुन्छ। त्यसकारण, ब्याकलिङ्कहरू बेच्नु अझै पनि वेबसाइट मुद्रीकरण गर्ने मुख्य तरिकाहरू मध्ये एक हो। हो, यो 5-7 वर्ष पहिलेको रूपमा लोकप्रिय छैन, तर यो राजस्व स्रोतको सफलता क्रेता र विक्रेताहरूको विवेकमा निर्भर गर्दछ।
के यो लिङ्कहरूमा पैसा बनाउन लाभदायक छ?
माथि उल्लिखित Sape 2021 अध्ययनले देखाएको छ कि उत्तरदाताहरूको 90% भन्दा बढी - विचार नेताहरू, निजी पेशेवरहरू, एजेन्सी प्रतिनिधिहरू र आन्तरिक टोलीहरू - लिङ्कहरू सिर्जना गर्छन् र लिङ्कहरू खरीद गर्छन्। विशेषज्ञहरू मध्ये, त्यहाँ एक पनि छैन जसले ब्याकलिङ्कहरू प्रयोग गर्दैन। यसले एक पटक फेरि प्रमाणित गर्छ कि बाह्य लिङ्किङ वातावरण प्राविधिक वा मोबाइल अनुकूलन भन्दा कम मूल्यवान छैन।
के लिङ्कहरू मागमा छन् र तिनीहरूलाई बेचेर तपाईले कति कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर हेरौं।
1. अस्थायी लिङ्कहरू
भाडा लिङ्कहरू संसाधनमा निश्चित समयको लागि लिङ्क मासलाई द्रुत रूपमा हेरफेर गर्नका लागि राखिन्छन्। नियमको रूपमा, यी अस्थायी लिङ्कहरूको भुक्तानी एक महिनाको लागि निश्चित गरिएको छ र हरेक दिन डेबिट गरिन्छ। यी अस्थायी लिङ्कहरूको बहुमूल्य किस्महरू मध्ये एक प्रासंगिक लिङ्कहरू हुन्, किनकि तिनीहरू सामग्रीसँग सान्दर्भिक छन् र यससँग संगठित रूपमा एकीकृत हुन्छन्।
लिङ्कहरूको मूल्य धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। अस्थायी लिङ्कहरूको मामलामा, आय स्रोतमा पृष्ठहरूको संख्या र तिनीहरूमा लिङ्कहरूको संख्यामा निर्भर गर्दछ (यससँग सम्बन्धित केही जोखिमहरू छन्, तर हामी तल ती बारे कुरा गर्नेछौं)।
2. स्थायी लिङ्कहरू
स्थायी लिङ्कहरू स्रोतमा प्रकाशित हुन्छन् (सामान्यतया पाठहरूमा) र पृष्ठ अवस्थित हुँदासम्म त्यहाँ रहन्छन्। नतिजाको रूपमा, यी ब्याकलिङ्कहरूको लागि भुक्तानी भाडाको लागि भन्दा धेरै उच्च छ, तर यो एक पटक मात्र गरिन्छ।
यसैले, स्थायी लिङ्कहरूको लागत अस्थायी लिङ्कहरूको भन्दा धेरै बढी छ। यसबाहेक, सम्बन्धित प्लेटफर्महरूमा, तपाईंले ढाँचा र त्यसकारण, मूल्यद्वारा तिनीहरूको ग्रेडेशनहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। अक्सर, त्यस्ता प्लेटफर्महरूले4प्रकारका स्थायी लिङ्कहरूलाई संकेत गर्दछ:
समाचारमा लिङ्कहरू। तिनीहरू पैसा कमाउने सबैभन्दा छिटो तरिका हुन्: साइटमा सान्दर्भिक समाचार वस्तुमा लिङ्क राख्न धेरै समय लाग्दैन। भुक्तानी एक पटक हो।
लेखहरूमा लिङ्कहरू। यी प्रकारका लिङ्कहरू पनि धेरै संसाधन-गहन छैनन्: वेबमास्टरले प्राप्तकर्ता स्रोतमा प्रासंगिक लिङ्कको साथ उसको/उनको स्रोतको बारेमा उपयोगी लेख पोस्ट गर्दछ (नियमको रूपमा, यो अनुकूलकद्वारा प्रदान गरिएको छ)।
स्रोतको विषयसँग सान्दर्भिक उत्पादन वा सेवाहरूमा जर्नल लेखहरूमा लिङ्कहरू। त्यस्ता लिङ्कहरूलाई केही प्रयास चाहिन्छ: तपाईंले सामग्री आफैं सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तर यस मोनेटाइजेशन विधिमा प्रतिफल3गुणा बढी छ, उदाहरणका लागि, समाचारमा लिङ्क राखेर।
अभिलेखमा लिङ्क। यी लिङ्कहरूले लगभग कुनै SEO जोखिम बोक्दैन। विजार्डले पहिले नै अनुक्रमित पृष्ठहरूमा ब्याकलिङ्कहरू राख्छ।
औसतमा, उचित रकमबाट भाडा लिङ्कहरू कमाउन सम्भव छ। प्रकाशकको ​​रूपमा, तपाईं आफैले मूल्य सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
लिङ्कहरूमा पैसा कमाउने जोखिमहरू र तिनीहरूलाई कसरी बच्ने
लिङ्क हेरफेरको सबैभन्दा ठूलो खतरा खोज इन्जिन द्वारा फिल्टर गर्न हो। त्यस पछि, साइट सबै हिसाबले पतन हुनेछ, जसको मतलब यो हो कि यसमा लिङ्कहरू SEO दृष्टिकोणबाट बेकार हुनेछ।
विज्ञापन र लिङ्क व्यापारको लागि विशेष रूपमा सिर्जना गरिएका साइटहरू, जसले जनतालाई उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दैन, चाँडै प्रतिबन्ध अन्तर्गत पर्दछ।
लिङ्कहरू बेचेर पैसा कसरी कमाउने, खोज इन्जिन फिल्टरहरूसँग परिचितता बेवास्ता गर्दै?
पैसा बनाउन लिङ्कहरू बेच्नु एक सरल प्रक्रिया हो। यद्यपि, यदि तपाईलाई पछ्याउने सही विधि थाहा छैन भने, यो सफल हुन गाह्रो हुनेछ। केवल यी दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्:
लिंक एक्सचेन्जमा भन्दा धेरै गुणा बढी मूल्यहरू सेट गर्नुहोस्। यसले जहाँ पनि जान इच्छुक गैर-लक्षित विज्ञापनदाताहरूलाई हटाउन मद्दत गर्नेछ। सम्भव भएसम्म तपाईंको विषयसँग सान्दर्भिक परियोजनाहरूसँग सहकार्य गर्न प्रयास गर्नुहोस् - UX डिजाइनको बारेमा ब्लगमा पोली कार्बोनेट संरचनाहरूको बारेमा लेख फेला पार्नु अनौठो छ।
खोज इन्जिनहरूलाई मूर्ख बनाउने प्रयास नगर्नुहोस्: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग २०% "खाली" पृष्ठहरू र 80% "बिक्रीको लागि" बीच सन्तुलन गर्न पर्याप्त सामग्री छ।
एङ्कर लिङ्कहरूबाट टाढा नजानुहोस्, एङ्कर बिना पोस्ट गर्नु सुरक्षित छ।
प्रत्यक्ष विज्ञापनदाताहरूको लागि एक व्यावसायिक प्रस्ताव सिर्जना गर्नुहोस्, जसमा, सावधानीपूर्वक, खोज इन्जिनहरूलाई अनावश्यक संकेतहरू नदिई, तपाइँ तिनीहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तपाइँ निश्चित शुल्कको लागि सामूहिक रूपमा लिङ्क निर्माणमा भाग लिन इच्छुक हुनुहुन्छ।
धेरैको अर्थ राम्रो होइन। ब्याकलिङ्कहरूको उचित मात्रा थप नगर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, प्रति महिना 5-10 इकाइ सामग्री प्रकाशित गर्ने जानकारी स्रोतको लागि,5लिङ्कहरू पर्याप्त भन्दा बढी छन्। बेच्नको लागि लिङ्कहरूको इष्टतम संख्या प्रति पृष्ठ दुई भन्दा बढी छैन।
बिस्तारै बेच्नुहोस्, कुनै फरक पर्दैन कि तपाइँ प्रक्रियालाई गति दिन चाहानुहुन्छ। बारम्बार बिक्रीले खोज इन्जिनहरूलाई संकेतको रूपमा सेवा गर्न सक्छ कि साइट केवल पैसा कमाउनको लागि अवस्थित छ। र त्यसपछि तपाईं दण्डको अधीनमा हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईंको वेबसाइट मुद्रीकरण गर्ने उत्तम तरिका
सबै वेबसाइट मालिकहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको उनीहरूको वेबसाइटबाट पैसा कमाउने उत्तम तरिका खोज्नु हो। वास्तवमा, वेबसाइट हुनु आफैमा अन्त्य होइन। तपाईंले आफ्नो वेबसाइटलाई प्रवर्द्धन गर्ने बारे सोच्नु पर्छ यसलाई थाहा पाउन र अन्य उपयोगी उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्न यो फाइदाको फाइदा उठाउनको लागि।
के तपाइँ तपाइँको साइट को प्रचार गर्न को लागी समस्या छ वा बरु तपाइँ यसलाई कसरी मुद्रीकरण गर्ने वा यसको साथ के गर्ने थाहा छैन? तपाईको चिन्ता जे भए पनि, संग Semalt को साझेदार कार्यक्रम, तपाइँ तपाइँको साइट संग पैसा बनाउन को लागी एक राम्रो तरिका पत्ता लगाउन निश्चित हुनुहुन्छ।
साथै, यदि तपाईंको साइटमा समस्याहरू छन् भने, हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले यसलाई प्रयोग गरेर पहिले समाधान गर्नुहोस् DSD उपकरण यसलाई पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्न। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट लाई राम्रो स्थिति मा प्राप्त गर्न को लागी तपाइँ के गर्न आवश्यक छ र के गर्न को लागी अधिक सही थाहा पाउनुहुनेछ।
लिङ्कहरू बेचेर आय उत्पन्न गर्न र एकै समयमा खोज इन्जिनहरूसँग साथी बन्न, यी दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्:
एक संसाधन विकास गर्नुहोस् जहाँ तपाइँ लिङ्कहरू बेच्नुहुन्छ। यसमा उच्च उद्धरण र PR, राम्रो ट्राफिक र अनुक्रमणिकामा ठूलो संख्यामा पृष्ठहरू हुनुपर्छ।
विश्वसनीय एक्सचेन्ज र भरपर्दो सेवाहरूमा खरिदकर्ताहरू खोज्नुहोस्।
लिङ्कहरूको मूल्य निर्धारण गर्न, डोमेन र स्रोतको उमेर, यसको उद्देश्य, CSI, ट्राफिक, स्थानहरू र तिनीहरूको संख्यालाई विचार गर्नुहोस्। तपाइँ प्रतिस्पर्धीहरूको स्टक मूल्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ, SEO एक्सचेन्जहरूको सिफारिसहरू आफैं (नियमको रूपमा, तिनीहरू बिगडाटा विश्लेषणमा आधारित छन्), तपाइँ सेवाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रति पृष्ठ 1-2 भन्दा बढी लिङ्कहरू प्रकाशित नगर्नुहोस्।
निश्चित गर्नुहोस् कि लिङ्क विषय पाठमा राखिएको छ र स्रोतको विषयसँग सान्दर्भिक छ। थप रूपमा, तपाइँ संदिग्ध क्षेत्रहरूमा संलग्न हुनुहुन्न - जुवा, क्यासिनो, वयस्क स्रोतहरू (त्यहाँ पूर्व शर्तहरू छन् जसको लागि Yandex ले गूढता, सपना पुस्तकहरू, राशिफल र अन्य छद्म- वा छद्म-वैज्ञानिक विषयहरू वर्गीकरण गर्न चाहन्छ जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सामग्री प्रदान गर्दैन। त्यो वास्तवमा संदिग्धमा आधारित छ)।
र आफ्नो सबै अण्डा एउटै टोकरीमा नराख्नुहोस्। यदि तपाईंसँग गुणस्तरीय, लक्षित र निरन्तर बढ्दो श्रोताको साथ विकास गरिएको स्रोत छ भने, यसलाई मुद्रीकरण गर्न अस्वीकार नगर्नुहोस् - प्रासंगिक विज्ञापन, टिजर वा ब्यानर बेच्नुहोस् (यस व्यवसायलाई कसरी लाभदायक बनाउने - भित्र आउनुहोस्, हामी तपाईंलाई बताउनेछौं)।
आजको बिषयमा तपाईको धारणा के छ ? टिप्पणीहरूमा हामीसँग साझेदारी गर्न नहिचकिचाउनुहोस्। साथै, यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न वा सुझावहरू छन् भने, तपाइँ सक्नुहुन्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस प्रत्यक्ष।